Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » IATA: Mitohy miadana kokoa ny fanarenana ny entan'ny rivotra
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) namoaka ny angon-drakitra Oktobra ho an'ny tsena fitaterana an'habakabaka eran-tany izay mampiseho fa nitombo hatrany ny fangatahan'ny entam-barotra fa tamin'ny hafainganam-potoana miadana kokoa noho ny volana teo aloha ary mijanona eo ambanin'ny haavon'ny taona lasa.
Ny fangatahana manerantany, refesina amin'ny kilaometatra-kilometatra (CTKs *), dia 6.2% ambanin'ny taona lasa tamin'ny volana oktobra (-7.5% ho an'ny asa iraisam-pirenena). Izany dia fanatsarana ny fihenan'ny 7.8% isan-taona isan-taona voarakitra tamin'ny volana septambra. Na izany aza, ny hafainganam-pandeha amin'ny volana oktobra dia miadana kokoa noho ny tamin'ny volana septambra izay nitombo 4.1% (1.1% ho an'ny iraisam-pirenena) ny isam-bolana.
Ny fahaiza-manao manerantany, refesina amin'ny kilaometatra misy kilaometatra (ACTK), dia nihena 22.6% tamin'ny volana oktobra (24.8% ho an'ny asa iraisam-pirenena) raha oharina tamin'ny taona lasa. Izany dia efa ho avo efatra heny noho ny fihenan'ny fangatahana, izay manondro ny crunch capacité mitohy sy mafy.
Ny fiovana isam-paritra matanjaka dia mitohy miaraka amin'ireo mpitatitra amerikana avaratra sy afrikanina izay mitatitra ny fisondrotana isan-taona amin'ny fangatahana (+ 6.2% sy + 2.2%), raha ny faritra hafa kosa dia nijanona tamina faritany ratsy raha oharina tamin'ny herintaona talohan'izay.
Ny fanatsarana ny fahombiazana dia mifanaraka amin'ny fanatsarana ireo tondro ara-toekarena lehibe;
Ny singa vaovao momba ny fanondranana ivelany amin'ny indostrian'ny Purchasing Managers 'Index (PMI) dia nijanona teo ambonin'ny marika 50 nandritra ny volana faharoa nisesy. Ny valiny mihoatra ny 50 dia manondro fitomboana ara-toekarena. Fivoarana lehibe io satria ny PMI dia tao amin'ny faritry ny fitomboana ratsy nanomboka tamin'ny tapaky ny taona 2018 ka hatramin'ny Aogositra 2020;
Ny varotra entana manerantany dia nitohy nirongatra hatrany tato anatin'ny volana vitsivitsy, hoy ny World Trade Organisation. Ny fiakarana dia tsy ho ampy hisorohana ny fihenan'ny taona iray 9.2% raha oharina amin'ny taona 2019. Ny ankamaroan'ity tany ity kosa dia haverina amin'ny 2021 miaraka amin'ny fanantenana 7.2% fitomboana isan-taona;
Ny PMI Global Composite izay taratry ny fiovan'ny vokatra eran-tany, ny asa, ny orinasa vaovao, ny fihemorana ary ny vidiny, dia manondro fa hitohy ny fanarenana ara-toekarena amin'ny Q4 / 2020 na eo aza ny fihenan'ny virus COVID-19 amin'ny tsena maro.
“Hiverina ny fangatahana entana ho an'ny rivotra - fironana hitantsika mitohy hatramin'ny telovolana. Ny olana lehibe indrindra amin'ny entam-piaramanidina dia ny tsy fahampian'ny fahaiza-manao satria mbola miorina amin'ny tany ny ankamaroan'ny sambo mpandeha. Ny faran'ny taona dia vanim-potoana fara tampony hatrany amin'ny entam-barotra amin'ny rivotra. Azo inoana fa hihitatra ireo mpiantsena miantehitra amin'ny e-varotra izany - ny 80% amin'izy ireo dia alefa amin'ny rivotra. Ka ny crunch fahaiza-manao avy amin'ny fiaramanidina mitaingina dia hitifitra mafy amin'ny volana faramparan'ny taona 2020. Ary vao mainka hiharatsy ny toe-draharaha rehefa mikaroka ny fahafaha-manaony ireo famoahana vaksinimandry efa ho avy izahay, ”hoy i Alexandre de Juniac, Tale Jeneraly sy CEO an'ny IATA.
Fampisehoana isam-paritra Oktobra
Seranam-piaramanidina Azia-Pasifika nahita ny fitakiana fihenan'ny entana iraisam-pirenena ho an'ny rivotra 11.6% tamin'ny Oktobra 2020 raha ampitahaina tamin'io volana io tamin'ny taona lasa. Izany dia fanatsarana ny fianjerana 14.6% tamin'ny volana septambra 2020 ary ny volana fanatsarana faharoa nisesy. Ny fahaiza-manao iraisam-pirenena dia mbola voafehin'ny faritra, nidina 28.7%. Na izany aza, fanatsarana izany noho ny fihenan'ny 31.8% ny isan'ny volana lasa teo. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ao amin'ny faritra dia nitatitra ny anton'isa avo indrindra amin'ny entana iraisam-pirenena izay maneho faniriana mafy amin'ny serivisy fitaterana entana.
Mpitondra any Amerika Avaratra namoaka fiakarana 1.3% amin'ny fangatahana iraisam-pirenena tamin'ny volana oktobra raha ampitahaina tamin'ny tamin'ny taona lasa - volana faharoa nitombo tao anatin'ny 10 volana. Ity fampisehoana matanjaka ity raha oharina amin'ny sisa amin'ny indostria dia natosiky ny làlan'ny Asia-Avaratra Amerika, taratry ny fiakaran'ny vidin'ny e-varotra vokatra vita any Azia ary ny fihenan'ny fahafaha-manao kely kokoa noho ny faritra hafa. Nihena somary nihena ny tsena anatiny tao an-toerana nanomboka ny volana septambra nefa natanjaka hatrany. Nihena 16.6% ny fahafaha-manao iraisam-pirenena.
Mpitondra entana eropeana nitatitra ny fihenan'ny fangatahana 11.9% tamin'ny volana oktobra raha ampitahaina tamin'ny tamin'ny taona lasa. Fanatsarana izany tamin'ny fianjeran'ny 15.6% tamin'ny volana septambra 2020. Ny entana amin'ny rivotra any amin'ny faritra dia tsy nisy fiantraikany tamin'ny fiovan'ny virus COVID-19. Ny fahaiza-manao iraisam-pirenena dia nihena 28% fanatsarana ny 32.6% tamin'ny volana lasa teo.
Mpitatitra atsinanana afovoany nitatitra ny fihenan'ny 1.9% amin'ny volan'ny entana iraisam-pirenena isan-taona tamin'ny volana oktobra, tsy niova hatramin'ny volana septambra. Na izany aza, ny hafainganam-pandeha amin'ny volana oktobra dia miadana kokoa noho ny tamin'ny volana septambra niaraka tamin'ny fangatahana isam-bolana, nanatsara ny 6.0% sy 2.5%. Ny fahombiazan'ny fahalemena dia entin'ny fangatahana ambany kokoa amin'ny làlan'ny varotra Afrika-Moyen Orient. Nihena 22.7% ny fahafaha-manao iraisam-pirenena.
Mpitondra Amerikana Latina nitatitra ny fihenan'ny 12.5% amin'ny volan'ny entana iraisam-pirenena tamin'ny volana oktobra raha ampitahaina tamin'ny tamin'ny taona lasa. Fanatsarana lehibe izany tamin'ny fihenan'ny 22.2% tamin'ny septambra 2020. Ny fiakaran'ny volana sy volana dia ny natanjaka indrindra tamin'ny faritra rehetra tamin'ny volana oktobra niaraka tamin'ny fitomboan'ny fangatahana 4%. Ny fivoaran'ny taona isan-taona ny fanatsarana ny faritra dia azo lazaina fa ny fisondrotana malemy tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Na izany aza, ny fanatsarana ny toe-javatra iasana amin'ny tsena lehibe vitsivitsy ao anatin'izany i Brezila sy ny fahazoana ny fahaizan'ny entana dia nanampy ihany koa. Ny fahaiza-manao iraisam-pirenena dia nihena 29.1% raha oharina tamin'ny 32.1% tamin'ny volana septambra.
Seranam-piaramanidina afrikanina nahita ny fitomboan'ny 2.8% isan-taona amin'ny volana Oktobra. Ity dia ambany noho ny fitomboana 12.1% tamin'ny volana septambra. Na eo aza izany dia mbola nametraka ny fitomboan'ny fangatahana iraisam-pirenena mafy indrindra ny faritra. Ny kely fahalemena amin'ny fampisehoana dia azo avy amin'ny fihenan'ny tsenan'i Azia-Afrika izay nihena ny fangatahana isa 19 isan-jato isan-taona. Nihena 20.8% ny fahafaha-manao iraisam-pirenena.